Billy Julie Nkpuchi - Imewe Mmewe
Satọdee 8 Mee 2021
Nkpuchi Ejiri mmụọ okwu gosipụtara nke a imewe nke a. Onye mmebe họrọ Billy na Julie maka udiri mmadu abuo. A na-ekezi ihe dị mgbagwoju anya site na ndozi parametric nke mgbakwasị ụkwụ nke jiometrị yiri udu, dabere na usoro akụkụ akụkụ na akụkụ. Dika ihe ntughari na onye ntughari, emeputara nkpuchi a iji mee ka ndi mmadu nyochaa akọnuche nke mmadu.
Aha oru ngo : Billy Julie, Aha ndị na-emepụta ya : Naai-Jung Shih, Aha onye ahịa : Naai-Jung Shih.
Nkpuchi Naai-Jung Shih Billy Julie